ရနျကုနျမွို့နယျတခြို့တှငျ စနေ၊ တနင်ျဂနှေ မနကျ (၁၀) နာရီမှ နလေ့ညျ (၂) နာရီထိ မီးပကျြမညျ | Yangon Directory | Myanmar Business Directory | Advertise in Yangon - Yangon Directory | Yangon Yellow Pages
ရနျကုနျမွို့နယျတခြို့တှငျ စနေ၊ တနင်ျဂနှေ မနကျ (၁၀) နာရီမှ နလေ့ညျ (၂) နာရီထိ မီးပကျြမညျ
လြှပျစဈဓါတျအားပို့လှတျ​ရေးနှငျ့ ကှပျကဲ​ရေးဦးစီးဌာန၊ ဓါတျအားစနဈကာကှယျ​ရေးနှငျ့ လြှပျစဈစမျးသပျ​ရေးဌာန (ရနျကုနျ) မှ ပငျမဓါတျအားခှဲရုံ Power Transformer မြား စဈ​ဆေးခွငျးလုပျငနျး ​ဆောငျရှကျမညျ ဖွဈသဖွငျ့ ရနျကုနျရှိ မွို့နယျတခြို့တှငျ စနေ၊ တနင်ျဂနှေ မနကျ (၁၀) နာရီမှ နလေ့ညျ (၂) နာရီထိ မီးပကျြမညျ ဖွဈကွောငျး YESC မှ သိရသညျ။
230kV အ​ရှဒေ့ဂုံ GIS ဓါတျအားခှဲရုံ၏ 125MVA Tr No.(1) ကို မလေ ၂၃ ရကျနေ့ (စ​နေ​နေ့) မနကျ (၁၀) နာရီမှ နလေ့ညျ (၂) နာရီထိ၊ 125MVA Tr No.(2) ကို မလေ ၂၄ ရကျနေ့ (တနဂျ​နှေ​နေ့) မနကျ (၁၀) နာရီမှ နလေ့ညျ (၂) နာရီထိ ယာယီ ဓါတျအားပိတျ၍ လုပျငနျး​ဆောငျရှကျသှားမညျ ဖွဈသညျ။
ထိုသို့ လုပျငနျး​ဆောငျရှကျရာတှငျ ဓါတျအားပွတျ​တောကျမှု​ လြော့နညျး​စေ​ရေးအတှကျ Tr No.(1) လုပျငနျး​ဆောငျရှကျ​နစေဥျ အခြိနျအတှငျး Tr. No.(2) ​ပျေါမှလညျး​ကောငျး၊ Tr No.(2) လုပျငနျး​ဆောငျရှကျ​နစေဥျ အခြိနျအတှငျး Tr. No.(1) ​ပျေါမှလညျး​ကောငျး လြှပျစဈဓါတျအား မြှ​ဝဓေါတျအား ဖွနျ့ဖွူး​ပေးထားမညျ ဖွဈသညျ။
သို့ရာတှငျ ထရနျစ​ဖျောမာ၏ သတျမှတျခံနိုငျရညျဝနျအားအရ ဝနျအား​လြော့ ထိနျးညှိခွငျးမြား​ဆောငျရှကျသှားရမညျ ဖွဈပါသဖွငျ့ ဒဂုံဆိပျကမျး၊ ဒဂုံအ​ရှေ့၊ ဒဂုံ​မွောကျ၊ ဒဂုံ​တောငျ၊​ ရှေ​ပေါကျကံမွို့နယျ​နရောမြားအတှငျး ယာယီဓါတျအားပွတျ​တောကျမှုမြားရှိမညျ ဖွဈကွောငျး သိရသညျ။
ရန်ကုန်မြို့နယ်တချို့တွင် စနေ၊ တနင်္ဂနွေ မနက် (၁၀) နာရီမှ နေ့လည် (၂) နာရီထိ မီးပျက်မည်
လျှပ်စစ်ဓါတ်အားပို့လွှတ်​ရေးနှင့် ကွပ်ကဲ​ရေးဦးစီးဌာန၊ ဓါတ်အားစနစ်ကာကွယ်​ရေးနှင့် လျှပ်စစ်စမ်းသပ်​ရေးဌာန (ရန်ကုန်) မှ ပင်မဓါတ်အားခွဲရုံ Power Transformer များ စစ်​ဆေးခြင်းလုပ်ငန်း ​ဆောင်ရွက်မည် ဖြစ်သဖြင့် ရန်ကုန်ရှိ မြို့နယ်တချို့တွင် စနေ၊ တနင်္ဂနွေ မနက် (၁၀) နာရီမှ နေ့လည် (၂) နာရီထိ မီးပျက်မည် ဖြစ်ကြောင်း YESC မှ သိရသည်။
230kV အ​ရှေ့ဒဂုံ GIS ဓါတ်အားခွဲရုံ၏ 125MVA Tr No.(1) ကို မေလ ၂၃ ရက်နေ့ (စ​နေ​နေ့) မနက် (၁၀) နာရီမှ နေ့လည် (၂) နာရီထိ၊ 125MVA Tr No.(2) ကို မေလ ၂၄ ရက်နေ့ (တနဂ်​နွေ​နေ့) မနက် (၁၀) နာရီမှ နေ့လည် (၂) နာရီထိ ယာယီ ဓါတ်အားပိတ်၍ လုပ်ငန်း​ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်သည်။
ထိုသို့ လုပ်ငန်း​ဆောင်ရွက်ရာတွင် ဓါတ်အားပြတ်​တောက်မှု​ လျော့နည်း​စေ​ရေးအတွက် Tr No.(1) လုပ်ငန်း​ဆောင်ရွက်​နေစဉ် အချိန်အတွင်း Tr. No.(2) ​ပေါ်မှလည်း​ကောင်း၊ Tr No.(2) လုပ်ငန်း​ဆောင်ရွက်​နေစဉ် အချိန်အတွင်း Tr. No.(1) ​ပေါ်မှလည်း​ကောင်း လျှပ်စစ်ဓါတ်အား မျှ​ဝေဓါတ်အား ဖြန့်ဖြူး​ပေးထားမည် ဖြစ်သည်။
သို့ရာတွင် ထရန်စ​ဖော်မာ၏ သတ်မှတ်ခံနိုင်ရည်ဝန်အားအရ ဝန်အား​လျော့ ထိန်းညှိခြင်းများ​ဆောင်ရွက်သွားရမည် ဖြစ်ပါသဖြင့် ဒဂုံဆိပ်ကမ်း၊ ဒဂုံအ​ရှေ့၊ ဒဂုံ​မြောက်၊ ဒဂုံ​တောင်၊​ ရွှေ​ပေါက်ကံမြို့နယ်​နေရာများအတွင်း ယာယီဓါတ်အားပြတ်​တောက်မှုများရှိမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
Event & Entertainment (1)
Shopping & Promo (5)
Yangon Trend (76)